विजय शाहीले अमेरिकी मेमरी च्याम्पियनलाई घर मै बोलाएर उल्लु बनाएकै हुन् त ? के हो बास्तबिकता ( हेर्नु’होस भिडियो ) – Dailny NpNews
विजय शाहीले अमेरिकी मेमरी च्याम्पियनलाई घर मै बोलाएर उल्लु बनाएकै हुन् त ? के हो बास्तबिकता ( हेर्नु’होस भिडियो )
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०७, २०७८ समय: ९:२३:४४
मेमरी कि’ङ भनेर चर्चामा आएका विजय शाही फेरी चर्चामा आएका छन । तर यो पाली भने उनि नेपाली मिडियामा आएर नभएर विदेशीको युट्युब च्यानलमा आएर चर्चामा आएका हुन् । बिजय शाहीको मेमरी पा’वरको बिषयमा यस अघि पनि जिज्ञा’शा राखेका अमेरिकन मेमरी एथलेट नेल्सन डेलिसले बिजय शाहीलाई आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत ल्याएका छन । नेल्सन आफै अमेरिकाको चार पटक मेमरी च्याम्पियन भएका व्यक्ति हुन् ।